Ngo-2022 ilori yokundwendwela ye-Honda Passport ukukhuphisana kwi-American Rally Association series
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ngo-2022 ilori yokundwendwela ye-Honda Passport ukukhuphisana kwi-American Rally Association series
Iqela leenjineli zeHonda lithatha umdyarho omtsha weRally Passport. I-Honda ityhila iloli yayo yohlobo lwe-2022 yePasipoti eyenzelwe ngokukodwa ukhuphiswano liqela lomdyarho weHonda Performance Development (HPD) iMaxxis Rally, ibalaselisa amandla amade kunye nokuqina okuzinzileyo okwenziwe kwiilori zakwaHonda.
Ibonisa uyilo olumxinwa lwePasipoti ka-2022, ilori yerali yenza umdyarho wayo wokuqala kwiLake Superior Performance Rally (LSPR) eMichigan ngo-Okthobha u-15 nowe-16. Iya kukhuphisana kwi-rally ye-American Rally Association (ARA) Iziganeko ngexa lonyaka wama-2022 kwiklasi ye-4WD enomda.
Umzekelo ophambili we-Honda "Racing Spirit," iqela le-HPD Maxxis Rally lenziwe ngamaqabane e-Honda azinze kwiziko loPhuculo oluzenzekelayo e-Ohio. Eli qela lixhasana neqela elikhulu leHonda of America Racing Team (HART), eliquka abahlobo abasuka kuphuhliso nakwindawo zokuvelisa eMntla Melika.
Izithuthi ezitalatweni eziguqulweyo ezifikelela kwisantya esingaphezulu kwe-100 mph kwiikhosi zendalo ezivaliweyo ezibandakanya igrabile, ukungcola, udaka nekhephu kwiindlela ezigubungela amakhulu eekhilomitha, uthotho lwe-ARA kaZwelonke kunye nolweNtshatsheli yeNgingqi lukhuphiswano olukhulu. Kumdyarho we-LSPR, ilori ye-Honda Passport yayiqhutywa yinjineli yakwa-Honda uChris Sladek, injineli yovavanyo lokunqunyanyiswa esekwe e-Ohio esekwe e-North American Auto Development Centre, kwaye iqhutywa ngu-Gabriel Nieves, injineli yoyilo ye chassis esekwe indawo efanayo.
Ukuhamba phambili kunye nokusebenza, ilori yokundwendwela ilungiselelwe ii-BRAID Winrace T rally amavili (7.5 ″ x17 ″) esongelwe kwinqanaba le-Maxxis rally-proven RAZR M / T okanye RAZR A / T amavili (265/70-R17) , Kuxhomekeke kwiimeko zomsitho. I-1/8 ″ -inch yeoyile yeoyile eshinyeneyo eyenziwe ngokwezifiso kunye neepleyiti zokwahlula ezikuma ngasemva zikhusela ngaphantsi, kunye neephaneli ze-polyethylene ezixineneyo ezigubungela itanki lamafutha kunye nezinye izinto. Carbotech XP12 iziqhoboshi brake kunye lobushushu eliphezulu racing brake fluid ukubonelela intsebenzo elekhtrons ngokungaguquguqukiyo bume rally.
Kuyamangalisa ukuba imveliso yePasipoti eyi-3.5-litre i-VTEC ® V6, isantya esi-9 sokuhambisa ngokuzenzekelayo nge-paddle shifters, Intelligent Management Torque Management (i-VTM4 ™) yonke inkqubo yokuqhuba ivili, kwaye zonke izinto zokumisa zishiywe zingalungiswanga ukhuphiswano; olongezayo kuphela kukuhambisa okuzenzekelayo okupholileyo okuphuma kwiPasipoti. Umqhubi usebenzisa indlela yokuhambisa yokulandelelana kunye nokushenxisa iswitch kulawulo oluphuculweyo, kwaye indlela yolawulo lwePasipoti yokuLawula ukuTsalwa kweMowudi yeSanti isetyenziselwa ukuhambisa i-torque efanelekileyo kunye nokusebenza kwindawo evulekileyo.
“Inyaniso yokuba bekungekho mfuneko yokuba senze uhlengahlengiso kwindlela yokuhamba okanye yokunqunyanyiswa kweHonda yokundwendwela yango-2022 okanye ukumiswa kwezo ndawo ziyohlwayayo kwaye ukhuphiswano luthetha lukhulu kukwazi nokusebenza okusemgangathweni kwiPasipoti,” utshilo injineli yakwaHonda kunye nomdyarho weembaleki uChris Sladek .
Ukhuseleko olongezelelekileyo, ngaphakathi kwitroli yokundwendwela ye-Passport ibandakanya izihlalo zokubaleka ze-OMP ezinamahashe okhuphiswano anamanqaku amathandathu, ikheyi yokuqengqeleka kwezokhuseleko, inkqubo yokucinezela umlilo, ikhompyuter yerali kunye nenkqubo yonxibelelwano emotweni. Ukunciphisa ubunzima, izihlalo zangasemva, ikhaphethi, ukufakwa kwesandi, kunye nezinye iziqwenga zangaphakathi zasuswa, kwaye icala le-SUV kunye neglasi yewindow yangasemva yatshintshwa yiLexan polycarbonate. Isiphatho sebhuleki esenziwa ngesanti kubunzulu baphantsi sonyusa ukuqhubekeka ngeekona ezixineneyo, ngelixa ukukhutshwa okulungisiweyo kuvelisa isandi esityikityiweyo se-rally. Eyilwe yi-HPD, imizobo esongelwe ngaphandle yePasipoti ibalaselisa amandla amdaka kunye nokuzonwabisa kweHonda Passport.
“Sikulungele ukubaleka nomdyarho wamahashe we-2022 weHonda Passport,” utshilo injineli yakwaHonda uGabriel Nieves. “Izakuba lixesha elimnandi kakhulu.”
Kwi-2021 yeLake Superior Performance Rally ngo-Okthobha u-15 kunye no-16, iqela lakhuphisana kuthotho lwe-ARA East Regional. Usuku lokuqala lokhuphiswano lwalunezigaba ezikhawulezayo ezineejika ezibalekayo kwaye zagijima kude kube sezinzulwini zobusuku, apho ibha yokukhanya encedisayo yePasipoti yayiyeyona ibalulekileyo ekugcineni isantya sokhuphiswano ehlathini. Iqela belisoloko libaleka amaxesha phakathi kwabali-10 kwabangama-42 abakhuphisana nabo bengingqi, kodwa itayi-de-bead kwiqonga lesi-3 ilibambile iqela, labangela ukuba bagqibe ngaphezulu kwemizuzu eli-9 kamva kunokuba bekulindelwe kwinqanaba.
Amanqanaba obuchwephesha ngakumbi, amabi kunye nokumanzi ayegcinwe usuku lwesibini, kunye nePasipoti eqhuba kakuhle kumavili ayo eMaxxis RAZR M / T. Iqela lihlala lithumela amaxesha phakathi kwabakhuphiswano bengingqi abali-15.
Iqela liye lagqiba i-22nd kuma-42 okhuphiswano lwengingqi, ebeka 4th ngaphandle kwaba-6 abakhuphisana nabo kwiklasi ye-4WD encinci.
I-2021 LSPR ngumnyhadala wesithathu weqela apho iqela liye lakhuphisana kwiHonda Passport. Ngexesha lomsitho wokuqala-iRally yeHlathi yeHlabathi yeOhio ye-2019 (i-SOFR), njengenxalenye yochungechunge lwe-ARA East Regional-iqela labeka i-2nd kwiklasi ye-4WD encinci kunye ne-12th iyonke ngaphandle kwabakhuphiswano abangama-75.